Baaq islaamnimo oo ku aadan Dhammaan waxgaradaka , aqoonyahanada, Culimada, Oday dhaqameedyada, haweenka iyo in alla iyo inta u danqaneysa Soomaali.
Marka hore mahad idilkeed waxaa iska leh Allaah, naxariis iyo nabad gelyana rasuulkeeni ayeey korkiisa ahaatay. Kadibna dhammaan akhristayaasha sharafta lahow iga gudooma salaanta islaamka ( A.C.W.W ).
Soomaaliyeey meel walboo aynu joognaba waxaa maalin walba daadanaya dhiigeenii, waxaa baab’aya hantideenii, waxaa barakacay maatadeenii, waxaa waddan walba lagu xasuuqayaa soomaalidii u qaxday, waxaa badaha ku la’anaya Soomaali, waxaa xabsiyadda adduunka ka buuxa dhalinyaradeenii iyo ubadkeenii. Meel walba waa boog, wax kasoo reyn ma jirto, illaa inay dhibaatadu sii badato mooyee, Mucaarad iyo dowlad inay isku soo dhawaadaan diyaar looma aha. Haddaba walaalka iyo walaasha muslimada aheey ma isweyddisay yaa u maqan Soomaali, yeey ka sugaysaa inuu u yimaado oo nabad u keeno.
Runtii waa wax qof kastoo damiir leh, oo ay ku jirto in yar oo islaamnimo ah uu ka danqanayo. Adduunkoo idil dhibaato wey ka dhacday, waxaana loo helay xal, annaga ma isweydiisay maxaa naga khaldan. Miyaynaan bani’aadan aheyn, miyeeynaan heshiin Karin, miyeeynaan dadka la mid aheyn. Soomaaliyeey aynu iska ilowno nin jecleysiga, qabiil jecleysiga, xasadka, xiqdiga, annagaa mudan, annagaa reer hebel ka baddan, annagaa xaq u leh, annagaa degna, anngaaa sidan ah, reer hebel waxba maaha, wallee haddeynaan arimahaas ka waantoobin, waxaynu halis ugu jirnaa inaynu baaba’no oo nalagu sheekeysto nalana yiraahdo ummad soomaali la oran jiray ayaa jiri jirtay.
Halakan Caawa uguma talagelin inaan maqaal dheer kusoo qoro, kaliya waxaan rabaa inaan idiin xasuusiyo, bal inaynu Allaah u noqono, oo bishan Barakeysan, oo hadda la galayo Tobankii habeen ee ugu Kheyrka badnaa, inaynu ka faa’ideysano, oo waddankan aynu u duceyno, bal inuu Allaah talada wanaagsan na waafajiyo. Soomaaliyeey waxaan aaminsanahay haddaad si niyad ah waddankan ugu wada duceysaan bal inaynu calal aqal bad baadi laheyn.
Allahayow Soomaali quluubtooda isku soo jeedi, oo waafaji talada wanaagsan. Allahayoow na badbaadi, adiga wax badbaadin karee. Allahyoow Soomaali ka yeel kuwa wanaagooda ka wada shaqeeya, oo xumaantooda iska ilaawa. Allahayoow Soomaali ka yeel kuwii dunida la tartama, oo ka shaqeeya horumarkooda, Allahayoow Soomaali ka yeel kuwii ka bogsooda qabiil iyo qabyaalad. Aaaaaammiiiin.